Puntland oo faah-faahin ka bixisay Guddigiii dhimsaha wadada Boosaaso oo xabsiga ay dhigtay – Bandhiga
Puntland oo faah-faahin ka bixisay Guddigiii dhimsaha wadada Boosaaso oo xabsiga ay dhigtay
Gudoomiyaha dagmada Boosaaso ee maamulka Gobalka Bari Cabdisalaan Bashiir oo ka warbixiyay Guddigii dhismaha wadada Bartamaha Boosaaso ee la xiray ayaa waxa uu ku tilmaamay iney sifo aan sharci aheyn wax u wadeen.
Gudoomiayaha ayaa sheegay in lacagta aysan ku iman nidaam sax ah oo la baalmaray sharciga isagoo intaa ku daray in Puntland aan lala socod siinin balse xubnaha Guddiga kaliya lagu wareejiyay.
Maamulka Gobolka Bari iyo taliska Booliska oo shir jaraa’id siwadajir ah u qabtay faah faahin intaasi ka dheer kama sii bixin xariga xubnaha ka tirsanaa Guddiga dhismaha wada dhex-marta bartamaha Magalada Boosaaso.
Puntland ayuu sheegay in Dowladda Soomaaliya ka codsadeen lacago lagu dhiso wadada Bartamaha Boosaaso,hayeeshee qorshuhu uu ahaa in Mas’uuliyiinta Maamulka lacagtaas lagu wareejiyo balse Ra’iisul Wasaare Kheyre uu gacanta u geliyay dad Shacab ah,isla markaana ay dalbadeen in lacagtaas dib dowladda loogu celiyo,hayeeshee guddiga ay sheegeen in qaar ka mid ah lacagta la isticmaalay.
Shan maalin ayey ku xeran yihiin Xabsi ku yaalla Boosaaso Xubnaha Guddiga dhismaha Wadada Bartamaha Magalada Boosaaso,waxaana xariga Xubnahaas cambaareeyay inta badan Bulshada ku nool deegaanada Puntland iyo qaar ka mid ah Xubnaha Baarlamaanka Maamulkaas.